ခွတှေလေကျတှေ မသယျခငျြအောငျဖွဈနတော ဘာကွောငျ့လဲ - OnDoctor
By Win Win May	 On Jun 5, 2018 Last updated Dec 15, 2018
ခြေတွေလက်တွေ မသယ်ချင်အောင်ဖြစ်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ
လူနာတော်တော်များများ ပြောကြပါတယ် ဒီစကားကို ။ နှုံးတယ် ခြေတွေ လက်တွေ မသယ်ချင်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်တာတွေက အများကြီးပါ။ သွေးအားနည်းတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ကိုယ့်မှာ သွေးထွက်နေတာ ဘယရှိလဲ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ၊ မရှိဘူးဆိုရင် ကျောက်ကပ်မကောင်းလို့များလား သွေးတိုး ဆီးချို ရှိနေလား မဟုတ်ဘူး အသက်ကငယ်ငယ်လေးရှိသေးတာ။
ဒါပေမယ့် အထင်မသေးနဲ့ အခုခေတ်က ငယ်ငယ်လေးတွေလည်း သွေးတိုးတွေ ဆီးချိုတွေနဲ့ နောက်ပြီး ဘာဆေးတွေသောက်နေရလဲ ?အရေးကြီးတယ် ဆေးတွေကြောင့် လိုင်စင် မရှိပဲ ထုတ်ထားတဲ့ ဈေးကွက်ထဲရောက်နေတဲ့ ဆေးတွေမှာ ဘာတွေပါမှန်း မသိနိုင်ဘူး ဗမာ တရုတ် ဆေးပေါင်းစုံ က steroid တွေ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ ပမာဏ များများ ပါနေတတ်တယ် ။
ဒါတွေက မကောင်းဘူး ကျောက်ကပ်ပျက်စီးတတ်တယ် ၊ ဆီးချိုတက်စေတယ်၊ အရိုးထိခိုက်တတ်တယ် ၊ မသောက်ရရင် နှုံးပြီးကျန်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါတွေက ခဏတာ ယာယီတော့ သိပ်ကောင်းတာ အကုန်ပျောက်တယ်လေ ဝေဒနာ ကိုက်ခဲတာ ကိုယ်ပူတာတွေ အစားလည်းစား ဝလာတယ် ။ ကြာလာရင် မကောင်းတာတွေ စုလာရော၊ ရောဂါတွေ အများကြီး လိုက်လာရော ။
နောက်ပြီး အရေးကြီးတာက ဆီးဆေး တွေသောက်နေရလား? ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်ဖြစ်ထားလား? သွေးထဲမှာ ပိုတက်စီယမ် ဓာတ်အားနည်းတက်ပါတယ် အရက်သောက်တဲ့ သူတွေမှာလည်း တွေ့ရများတယ်၊ ခြေထောက်တွေ မသယ်ချင် မမချင် လမ်းမလျှောက်ချင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အရမ်းဆိုးလာရင် လက်တွေပါ မလှုပ်နိုင် ဖြစ်လာပြီး နောက်ဆုံးမှာ အသက်ရှုရပ်တာတွေ အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အစားအသောက်ထဲ မှာ ပုံမှန်စားရင် ပါပေမယ့် အစားကောင်းကောင်း မဝင်တဲ့သူတွေ အူက အစာစုပ်ယူမှုမကောင်းတဲ့ အခြေနေတွေမှာ ပိုတက်ဆီယမ် ဓာတ်က အားနည်း တတ်ပါတယ်။ သေချာတော့ စမ်းသပ်ရပါတယ်၊ မသယ်ချင်တာလား လုံးဝကီု မလှုပ်ချင်တာလား ဆိုတာကို ၊ ရောဂါရော ကုသမှုပါ လုံးဝ မတူလို့ပါ။
လူနာတျောတျောမြားမြား ပွောကွပါတယျ ဒီစကားကို နှုံးတယျ ခွတှေေ လကျတှေ မသယျခငျြဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ ဖွဈနိုငျတာတှကေ အမြားကွီးပါ။ သှေးအားနညျးတာဖွဈနိုငျပါတယျ ကိုယျ့မှာ သှေးထှကျနတော ဘယရှိလဲ ခန်ဓာကိုယျကနေ၊ မရှိဘူးဆိုရငျ ကြောကျကပျမကောငျးလို့မြားလား သှေးတိုး ဆီးခြို ရှိနလေား မဟုတျဘူး အသကျကငယျငယျလေးရှိသေးတာ။
ဒါပမေယျ့ အထငျမသေးနဲ့ အခုခတျေက ငယျငယျလေးတှလေညျး သှေးတိုးတှေ ဆီးခြိုတှနေဲ့ နောကျပွီး ဘာဆေးတှသေောကျနရေလဲ ?အရေးကွီးတယျ ဆေးတှကွေောငျ့ လိုငျစငျ မရှိပဲ ထုတျထားတဲ့ ဈေးကှကျထဲရောကျနတေဲ့ ဆေးတှမှော ဘာတှပေါမှနျး မသိနိုငျဘူး ဗမာ တရုတျ ဆေးပေါငျးစုံ က steroid တှေ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှေ ပမာဏ မြားမြား ပါနတေတျတယျ ။
ဒါတှကေ မကောငျးဘူး ကြောကျကပျပကျြစီးတတျတယျ ၊ ဆီးခြိုတကျစတေယျ၊ အရိုးထိခိုကျတတျတယျ ၊ မသောကျရရငျ နှုံးပွီးကနျြခဲ့တယျ၊ အဲဒါတှကေ ခဏတာ ယာယီတော့ သိပျကောငျးတာ အကုနျပြောကျတယျလေ ဝဒေနာ ကိုကျခဲတာ ကိုယျပူတာတှေ အစားလညျးစား ဝလာတယျ ။ ကွာလာရငျ မကောငျးတာတှေ စုလာရော၊ ရောဂါတှေ အမြားကွီး လိုကျလာရော ။
နောကျပွီး အရေးကွီးတာက ဆီးဆေး တှသေောကျနရေလား? ဝမျးလြှောဝမျးပကျြဖွဈထားလား? သှေးထဲမှာ ပိုတကျစီယမျ ဓာတျအားနညျးတကျပါတယျ အရကျသောကျတဲ့ သူတှမှောလညျး တှရေ့မြားတယျ၊ ခွထေောကျတှေ မသယျခငျြ မမခငျြ လမျးမလြှောကျခငျြဖွဈတတျပါတယျ။ အရမျးဆိုးလာရငျ လကျတှပေါ မလှုပျနိုငျ ဖွဈလာပွီး နောကျဆုံးမှာ အသကျရှုရပျတာတှေ အထိဖွဈနိုငျပါတယျ။
အစားအသောကျထဲ မှာ ပုံမှနျစားရငျ ပါပမေယျ့ အစားကောငျးကောငျး မဝငျတဲ့သူတှေ အူက အစာစုပျယူမှုမကောငျးတဲ့ အခွနေတှေမှော ပိုတကျဆီယမျ ဓာတျက အားနညျး တတျပါတယျ။ သခြောတော့ စမျးသပျရပါတယျ၊ မသယျခငျြတာလား လုံးဝကီု မလှုပျခငျြတာလား ဆိုတာကို ၊ ရောဂါရော ကုသမှုပါ လုံးဝ မတူလို့ပါ။